Hapetraka ny fotodrafitrasa avo lenta : Ho Madagasikara maoderina no tanjona -
AccueilRaharaham-pirenenaHapetraka ny fotodrafitrasa avo lenta : Ho Madagasikara maoderina no tanjona
Mandalo eto Madagasikara, amin’izao fotoana izao, ny delegasiona avy amin’i Japon tarihin’ny minisitry ny Fotodrafitrasa sy ny Fitaterana ary ny Fizahantany (MLIT), Shinsuke Suematsu, ahitana mpamatsy vola sy solontenan’orinasa maro.
Notanterahina omaly, araka izany, teny amin’ny Centre de Conférence International (CCI) Ivato, ny Fihaonan’ny sehatra miankina sy tsy miankina amin’ny Fanjakana eo amin’ny Fotodrafitrasa ambony kalitao na avo lenta. Fihaonana izay niarahan’ny Fanjakana malagasy tamin’ny alalan’ny ministera eo anivon’ny Prezidansa misahana ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny Tany, ny ministeran’ny Asa Vaventy, ny ministeran’ny Fitaterana ary ny ministeran’ny Angovo, tamin’ny governemanta japoney. Araka io fihaonana io, nahatratra 300 teo ho eo ireo mpandray anjara tamin’izany nahitana ireo olona ambony avy amin’ny governemanta japoney, solontenan’ireo orinasa japoney manodidina ny 30 teo ho eo ary mpandraharaha malagasy maro avy amin’ny sehatra isan-tokony. Nivoitra tamin’ny asa natao, izay naharitra ora valo, tamin’io Fihaonana io fa ilaina ny fametrahana ny fotodrafitrasa ambony katitao sy avo lenta eto Madagasikara. Ho Madagasikara maoderina mantsy no tanjona napetraky ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.
Ho an’ny minisitra japoney misahana ny MLIT, Shinsuke Suematsu, nitondra ny politikan’ny governemanta japoney amin’ny fampiroboroboana ny famatsiana ny fotodrafitrasa ambony kalitao amin’ireo firenena afrikanina.
Nanambara kosa ny minisitry M2PATE, Narson Rafidimanana fa mihamafy ny fifandraisan’i Japon sy i Madagasikara, indrindra eo amin’ny lafiny sosialy sy toe-karena. Notsindriany ihany koa ny filàn’ny firenena ny fotodrafitrasa ambony kalitao manaraka ny toetr’andro.
Ankoatra izay, samy nampiseho ny filàny sy ny laharam-pahamehany kosa ireo ministera malagasy efatra. Araka izany, manana vinavina amin’ny famatsiana ny fotodrafitrasa avo lenta sy hanamafy ny fifanakalozana sy ny fiaraha-miasa eo amin’ny tontolon’ny fotodrafitrasa amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara ry zareo Japoney.
Ankoatra izay, tontosa omaly, teny amin’ny CCI Ivato ihany koa ny fifanaovan-tsoniam-piaraha-miasa teo amin’i Japon sy i Madagasikara tamin’ny alalan’ireo ministera malagasy efatra (M2PATE, MTP, MTM, MEEH).
Voalaza mantsy fa tsy vao izao i Japon no niara-niasa tamin’i Madagasikara. Anisany fotodrafitrasa tafiditra tamin’ny famatsiana Ticad VI mantsy izao ny fanitarana sy seranan-tsambon’i Toamasina izay ry zareo Japoney no mandray an-tanana azy, sns.
Tsy vao izao no voatonona ny anaran’ny minisitry ny Atitany, raha fifidianana no resahina. Efa hatrany amin’ ny fifidianana dingana voalohany no efa re, fa isan’ny mitsabaka feno anatin’ny raharaham-pifidianana ny tenany, raha raisina ny ...Tohiny